Goolhayaha Man United ee David de Gea oo uu mid gaar ah u yahay kulanka caawa ay ka horjeedaan Kooxda Southampton – Gool FM
(Manchester) 13 Luulyo 2020. Goolhaye David de Gea ayuu mid gaar ah u yahay kulanka horyaalka Premier League ee ay caawa ka horjeedaan Southampton.
David de Gea ayaa safan doona kulankiisii ​​400-aad ee Kooxda Manchester United kulanka ay caawa wajahayaan Naadiga Southampton.
Xiddiga heerka caalami ee Waddanka Spain, De Gea ayaa Man United ku soo biiray sanadkii 2011-kii, kaddib markii heshiiskiisa kooxda Atletico Madrid lagu baayacay adduun lacageed dhan 18.9 milyan oo gini.
Tababaraha Kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjaer oo ka hadlaya safashada goolhaye David de Gea kulankiisa ​​400-aad ee kooxda ayaa yiri: “David waa mid cajiib ah tan iyo markii uu halkan yimid.
“David wuxuu isku dayayaa in Kooxdiisa uu ka caawiyo qaabkii ay ugu soo bixi lahayd tartanka Champions League kal ciyaareedka soo aaddan.
”Isaga waa mid raacaya waddadii uu hore u jeexay goolhaye Peter Schmeichel, waan ku kalsoonahay wax qabadkiisa ka hor kulanka caawa” ayuu yiri Macallin Solskjaer.
Solskjaer waxa uu intaa ku daray: “Maskaxdayda kuma fikirin hal ilbiriqsi haba yaraatee inaan kooxda ka diro.
”Inaad noqoto goolhaye Manchester United, waa inaad lahaataa maskax xooggan sida De Gea.
”Waxaan doonayaa inuu ciyaaro 10 sano oo dheeri ah, wakhtiga wuu awoodi doono inuu halkaan sii joogo, kaddib markii la sheegay in booskiisa koowaad uu shaki ku jiro.”
Macallin Ole Gunnar Solskjaer ayaa ku adkaysanaya inuusan waligii ku fikirin inuu ka tuuro booska koowaad ee kooxda, kaddib markii uu qalinka ku duugay heshiis cusub uu todobaadkii ku qaadanayo adduun dhan 375,000 kun oo gini bishii September.
De Gea ayaa hiigsanaya rikoorka goolhayaha ugu safashada badan Kooxda Man United ee Alex Stepney, kaas oo xirnaa Maaliyadda Kooxdiisa 539 kulan.
Man United ayaa eeganeysa booska sadexaad ee kala sarraynta horyaalka Premier League kulanka caawa ay ku martigelinayaan Kooxda Southampton garoonka Old Trafford, xilli kaliya afar kulan ay u harsan tahay.
Si kastaba ha ahaatee, Goolhaye Devid De Gea ayaa Man United kula guuleystay tartammo kala duwan oo ay ka mid yihiin; Horyaalka Premier League, FA Cup, EFL Cup, FA Community Shield iyo Tartanka UEFA Europa League.